Dinquu Dayyaasaa - Wikipedia
Dinquu Dayyaasaa abbaa qabeenyaa fi tola-oolaa yoo ta'u abbaa Koolleejjii Riifti Vaaliti. Dinquun dhaabbata Televizyiinii tamsaasu kan Oromia Broadcast Service (OBS) jedhamus hundeesseera.
1 Dhaloota Isaa
2 Qabeenya Horachuusaa
3 Tola Ooltummaa
Dhaloota Isaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Dinquu Dayyaasaa godinaa addaa naannawaa finfinnee kombolee bakka addaa Gabreelii Leencaa jedhamutti dhalate. Abbaan Dinquu Dayyaasaa Abbaa makkoo jedhamaa inniss qallichaa kabajamaa ijoollee shantamii lama qaba. Dinquu ilmoo soddommii saddeettaffaa ta'ee dhalate. Dayyaasaan nama aangoo qabu yoo ta'u giraazmaachii ture. Feedhii aadaa Oromoo guddisuuf qaburraan kan ka'es, Dayyaasan miseensa Waldaa Wal-Gargaarsaa Maccaa fi Tuulamaa ture. Haatii Dinquu Daansee Gurmuu jedhamti.
Dinquun Sandafaa haa dhalatu malee kan guddate garuu Aanaa Boosat, Ganda Rukeecha fi Boqoree keessatti. Dinquun barnoota sadarkkaa tokkoffaa fi giddu-galeessa lammaffaa Mana Barumsa Walancitiitti kan barate yoo ta'u mana barumsaa ga'uuf naannoo sa'aatii sadi'ii deema ture. Barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo magaalaa Adaamaatti Mana Barumsa Haawaasitti barate.
Qabeenya Horachuusaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Abbaan Dinquu, Dinquun akka qotatuu fi of danda'uuf qotiyyoota cimdii lamaa fi lafa qarxii afurtamii shan hojjattoota wajjin kenneefi. Haala kanaan Dinquun barachaa fi qotachaa ture. Dinquun sangaa gabbisuun bu'aa guddaa akka qabu waan hubateef xaafii sirriitti qotee gurguruun sangaa gabbisuu jalqabe. Sangaa gabbisuu qofaan osoo hin daangeffamin, baaburri midhaan daaku waan hin jirreef, Dinquun kana hubachuudhan baabura midhaanii iddoo Tirii Sangootaa jedhamutti dhaabe.
Haala kanaan qabeenya horachaa kan deeme Dinquun, bara 1998 gamoo Naa'ol jedhamu magaalaa Adaamaatti ijaare. Gamoon kun yeroo amma (bara 2015) hoospitaalaa fi koollejjii fayyaa ta'uun tajaajilla jira. Itti aansun bara 1999 mana barumsa sadarkaa tokkoffaa kan NFYD Lakkoofsa 1 jedhamu magaalaa Adaamaatti ijaare. Boodarras ol guddachuun manni barumsaa kun barattoota oolmaa daa'immaniirraa kaasee hanga qophaa'inaatti barsiisaa jira. Yeroo amma magaalaa Adaamaa keessa manni barumsa kun lama yoo ta'u magaalota kan biraattis babal'achaa jira. Itti fufuun, bara 2000 Dinquun Koolleejjii Riifti Vaalii hundeesse. Koollejjiin kun sadarkaa olaanatiin barsiisaa waan tureef battalumatti gara yuunivarsiitii koollejjiitti ol guddate. Yeroo ammaa Koollejjiin Yuunivarsiitii Riifti Vaalii kaampaasii kudha shan kan qabu yoo ta'u walumaa galatti barattoota 120,000 yoo qabaatu kana keessa 78,000 barattoota idilee fi 42,000 ammoo barattoota barnoota fageenyaa baratani.
Tola Ooltummaa[gulaali | lakkaddaa gulaali]
Koollejjii Yuunivariitii Riifti Vaalii keessatti, Dinquun barattoota harka qalleeyyii fi gargaarsa hin qabne tola akka baratan carraa iskoolaarshiippii kenneefii barsiisun beekkama. Akkaataa kanaan barattoonni kuma baayyee ta'an hanga ammaatti Riifti Vaalitti baratanii eebbifamaniiru.
Dinku Deyasa Biography and RVUC Part 1, dhumarratti kan baname: Ebla 8, 2015
Weebsaayitii Yuunivarsiitii Koollejjii Riifti Vaalii
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinquu_Dayyaasaa&oldid=37146" irraa kan fudhatame
Abbaa Qabeenyaa Oromoo
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 14 Haggaya 2021, sa'aa 16:46 irratti.